ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးမှားယှငျးနိုငျသော? – 2ငါးကို
မူလစာမျက်နှာ / Church ကို / အဆိုပါ Papacy / ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးမှားယှငျးနိုငျသော?
ကက်သလစ်ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးအမှန်ပင်မမှားယွင်းကြောင်းယုံကြည်, ဒါပေမဲ့သာယုံကြည်ခြင်းကိုကိစ္စရပ်များအပေါ်, လေးကအလွန်တိကျတဲ့အခွအေနနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ကြသည်တဲ့အခါမှသာ, သူသည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်အားဖြင့်ပဲ့ထိန်းသည်သာဖြစ်သောကြောင့်.
အဆိုပါပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးတစ်ဦးသောသူသည်, နှင့်အခြားသူကဲ့သို့, ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးမှာကျဆုံးသွားတဲ့အပြစ်ရှိသောသူသည်. သေး, စိန့်ပေတရု၏တိုက်ရိုက်ဆက်ခံအဖြစ်, သူဘုရားကျောင်းဩဝါဒကိစ္စရပ်များအပေါ်အမှားများကိုရှောင်ရှားရန်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်အားဖြင့်ပဲ့ထိန်းသည်. အချို့, ပုပ်ရဟန်းမင်းကျမ်းစာ၌ကိုနားလည်ကက်သလစ်များအတွက်အတားအဆီးကို set up ဟန်စေခြင်းငှါ, သို့မဟုတ်သူပင်ဝိညာဉ်ရေးရာအာဏာရှင်တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာနဲ့တူထင်ရစေခြင်းငှါ, သူတို့ယုံကြည်ရမယ်အဘယျသို့ကက်သလစ်မှအဆုံးအဖြတ်. စနစ်တကျနားလည်သဘောပေါက်, သော်လည်း, အ papacy သညျယရှေုသမ္မာကျမ်း၏အယူမှားအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူသို့ခေါ်သောမှသူမ၏စောင့်ရှောက်နိုင်ရန်အတွက်သူ့ရဲ့ဘုရားကျောင်းအားပေးသောကြီးမားတဲ့ဆုကြေးဇူးဖွစျသညျ, နှင့်သူမ၏ကိုယ်တော်နှင့်အတူတစ်ဦးပိုမိုနက်ရှိုင်းတဲ့ဆကျဆံရေးသို့ကြီးထွားကိုကူညီ.
ကက်သလစ်ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးနှင့် ပတ်သက်. ယုံကြည်အဘယျသို့ကူညီပံ့ပိုးရန်အားကြီးသောပင်ကိုယ်မူလသက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်. ကြည့်ကြပါစို့ …
ဖြစ်နိုင်ပေတရုနှင့်ပုပ်ရဟန်းမင်းမှားယှငျးနိုငျ၏အခှငျ့အရေးပိုနားလည်သဘောပေါက်ဘို့အရေးအပါဆုံးကျမ်းစာ၌ကျမ်းပိုဒ်သည် မဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်း 16:17-19. ဤကျမ်းပိုဒ်များတွင်, ကျနော်တို့မြင်ရပါလိမ့်မည်အဖြစ်, ပတေရုသညျယရှေုကနေအထူးဆုံးမဩဝါဒပေးခြင်းအခွင့်အာဏာအားလက်ခံတွေ့ဆုံ. စင်မြင့်တင်ထားရန်, ယရှေုသညျလူသူသည်ယုံကြည်သူတကျိပ်နှစ်ပါးသောတမန်တော်ဟုမေးခဲ့သည်. သူတို့ကမမှန်ကန်ကြောင်းအဖြေကိုတစ်ဦးစီးရီးပြန်ပေး. ငါတို့သခင်ပြီးတော့သူတို့ကိုမေးတယ်, "ငါသည်ဖြစ်ကြောင်းကိုသင်သည်အဘယ်သူဖြစ်သည်ဆိုကြ?" ဤအချက်မှာ, တမန်တော်ရှိမုန်ဆယျ့နှစျကိုယ်စားပြောဆိုရန်ရှေ့သို့ခြေလှမ်း, မှန်ကန်သောအဖြေကိုပေးကမ်း: "ကိုယ်တော်သည်ခရစ်တော်ဖြစ်ကြောင်း, အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်၏သားတော်။ "ဒီရန်, ယရှေုသညျတုံ့ပြန်:
17 “မင်္ဂလာသင်, ရှိမုန်ဗာ Jona! အသွေးအသားသည်ဤအကြောင်းအရာကိုသင့်အားထင်ရှားမမူ, ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသူသည်သော်လည်းငါ့ခမညျးတျော.
18 ထိုအခါငါသည်သင်တို့ကိုပြောပြပါ, သင်သည်ပေတရုဖြစ်၏, ဤကျောက်ပေါ်မှာငါ့အသင်းကိုငါတည်ဆောက်မည်လိမ့်မည်, နှင့်ငရဲ၏တန်ခိုးကြောင့်ဆန့်ကျင်မနိုင်ရကြလိမ့်မည်.
19 ငါသည်သင်တို့ကိုကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့၏သော့ကိုငါပေးမည်, သမြှသညျမွကွေီးပျေါမှာခညျြနှောငျကောငျးကငျဘုံ၌ခညျြနှောငျခံရကြလိမ့်မည်, သမြှသညျမွကွေီးပျေါမှာချွတ်ကောငျးကငျဘုံ၌ပြုတ်ခံရကြလိမ့်မည်။”
ပထမဦးဆုံး, ကျမ်းပိုဒ်အတွက် 17, သခင်ဘုရားကိုပတေရုသကောင်းကြီးပေးသော, သိပ္ပံအတတ်တော်အတည်ပြုမဟုတ်လူ့ပင်ကိုယ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမဲ့ဘုရားသခငျ့ဗျာဒိတ်တော်၏.
ဒုတိယအချက်မှာ, ကျမ်းပိုဒ်အတွက် 18, သူကရှိမုနျကိုသူ့အနာမသစ်ကိုပေးသည်, ပတေရုသ, အထဲကနေသူ့ကိုရန်သူ၏စကားပွညျ့စုံစ ယောဟန်၏ဧဝံဂေလိတရားကို 1:42. ယရှေုသညျသူ့အပေါ်၌သူ၏ဘုရားကျောင်းဆောက်လုပ်ဖို့ကတိပေးထား.
တတိယ, ကျမ်းပိုဒ်အတွက် 19, ယရှေုသညျပတေရုသညျကောငျးကငျနိုငျငံတျော၏သော့၏ဆုကြေးဇူးကိုနှင့်ချည်နှောင်ဖို့အခွင့်အာဏာနှင့်မြည်းကြိုးကိုဖြည်ပေးသည် (ရဗ်ဗိဘာသာစကား၌ဤဖို့ရည်ရွယ် ပိတ်ပင် နှင့် ခွင့်ပြု), မိမိအမွကွေီးဆုံးဖြတ်ချက်များကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူထောကျခံခဲ့ကြလိမ့်မယ်လို့သူ့ကိုအာမခံ. ဤတွင်ဒီကိစ္စကို၏ crux ဖြစ်ပါသည်! ပတေရုသညျမွကွေီးပျေါသှနျသငျသောအရာတို့ကိုကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောဘုရားသခင်ကိုအမှန်တရားတွေအဖြစ်ထောကျခံခဲ့ကြလိမ့်မည်. ရှင်းနေသည်မှာ, သူအပြစ်ရှိသောသူမစုံလင်သည်နှင့်ကွောငျ့,, ပတေရုသညျဘုရားသခငျ၏အလိုတော်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ကြောင်းကိုပညတ်တော်တို့ကိုထုတ်ပေးမှသူ့ကိုတားဆီးဖို့အထူးကျေးဇူးတော်အားပေးရဦးမည်. ဒီအထူးကျေးဇူးတော်ကက်သလစ်ပုပ်ရဟန်းမင်းမမှားယွင်းမခေါ်အဘယ်သို့သောအ. ကသာမရှိရင်, ဘုရားသခင့စစ်မှန်တဲ့-သောအဖြစ်အယူမှားအယူဝါဒကိုအတည်ပြုဖို့ရှိခြင်း၏အနေအထားအတွက်ဖြစ်လိမ့်မယ်, ဒါပေါ့, သူဟာအမှန်တရားအတွင်းသဘောဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်မဖြစ်နိုင်ပေမည် (ကြည့်ရှု ယောဟန်သည် 14:6). ဒါကြောင့်အခြားလမ်းထားရန်, ဒါကြောင့်သစ္စာရှိသောအပျေါမှာခညျြနှောတစ်ဦးမှားသှနျသငျစေအသင်းတော်များ၏မွကွေီးခေါင်းဆောင်အဘို့အဖြစ်နိုင်လျှင်, ထို့နောက်ဘုရားကျောင်းသူကငရဲတံခါးကတိပေးသညျယရှေုသူမ၏စိတ်ချပါသူမ၏ဆန့်ကျင်မနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဘုရားသခင့တည်ငြိမ်မှုကင်းမဲ့ (Matt. 16:18).1
ထဲမှာ တမန်တော်မြတ်ဟေရှာယ၏စာအုပ်, သခင်ဘုရား sternly ရှင်ဘုရင်၏ဘဏ္ဍာစိုးအမှာစကားပြောကြား, တော်ကြီးရှေဗန, ဟုဆို, "ငါသည်သင်တို့၏ရုံးထံမှသင်တို့ထိုးလိမ့်မည်, သင့်ဘူတာရုံမှဆင်းချပစ်လိမ့်မည်. ... ထိုအခါငါအပေါ်ထားမည် [သင့်ရဲ့ဆက်ခံမယ့်] ဒါဝိဒ်၏အမျိုး၏တံခါးသော့ကိုပခုံး; သူဖွင့်လှစ်ကြမည်, အဘယ်သူမျှမပိတျထားရကြမည်; သူကပိတ်ထားရမည်, အဘယ်သူမျှမ "ဖွင့်လှစ်ကြမည် (22:19, 22; အလေးပေးဆက်ပြောသည်).2
ယရှေုသညျရှငျဘုရငျတို့၏ဘုရင်ဖြစ်, "သနျ့ရှငျးတစျခု, စစ်မှန်တဲ့တယောက်, ဒါဝိဒ်မင်း၏တံခါးသော့ကိုသူ, အဘယ်သူသည်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ဘယ်သူမျှမပိတ်ရကြလိမ့်မည်, အဘယ်သူသည် "သျောလညျးငွအဘယ်သူမျှမဖွင့်လှစ် (ဗျာဒိတ်ကျမ်း 3:7; လည်းမြင် 1:18 နှင့် အလုပ် 12:14). တွင် မဿဲ 16:19, ခရစ်တော်ရှငျဘုရငျအသင်းတော်ကြီးကြပ်ဖို့ကပတေရုသူ့ဘဏ္ဍာစိုးဖြစ်ခန့်အပ်, မြေကြီးပေါ်မှာရှိသောသူ၏နိုငျငံ, သူ၏မရှိခြင်းအတွက်. ဒါကြောင့်အကျင့်ကို, သခင်ဘုရားသည်သူ၏လွန်ကဲသောအခွင့်အာဏာကိုလက်လွှတ်မပါဘူး, ရှေးဟောင်းဧကရာဇ်သူတို့၏ဘဏ္ဍာစိုးမှသူတို့ relinquished ထက်မဆိုပိုပြီး.
ပေတရု၏သွန်သင်ချက်ကိုမှားယှငျးနိုငျ, ကဲသရိဖိလိပ္ပိမှာမိမိဝန်ခံအတွက်သောတဦးတည်းပုံရိပ်ကိုတကွက် (Matt. 16), ယေရုရှလင်မြို့၏အကျော်ကြားကောင်စီမှာထင်ရှား၏, မှာတမန်တော်မောရှေပညတ်မှလိုက်နာမှုကယ်တင်ခြင်းအတွက်လိုအပ်သည်ဖြစ်စေမဆုံးဖြတ်ရန်တွေ့ဆုံရန်.
စိန့်လုရဲ့အကောင့်, ထဲမှာ တမန်တော်၏တမန်တော်, သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်အသင်းတော်ရဲ့တဆင့်စကားပြောပြသထားတယ် Magisterium (သို့မဟုတ် "သှနျသငျရုံး")တို့တွင်အရှင်သခင်ဖြစ်ပါသည်, တမန်တော်ပရိသတ်မှတဆင့် (သို့မဟုတ်ခရစ်ယာန်ဂိုဏ်းအုပ်ဆရာတော်) ပတေရုသနှင့်အတူပြည်ထောင်စုထဲမှာ (ပုပ်ရဟန်းမင်း)အဖျားကဒီအယူဝါဒအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းစီစဉျ (15:28). အထူးသ, ထိုသို့အငြင်းပွားမှုတွင်နေထိုင်သောသူပတေရုသသည်; ဒါကြောင့်တစ်ဦးအနီးကပ်ရန်ဆွေးနွေးငြင်းခုံတတ်၏သောသူ၏မိန့်ခွန်းဖြစ်ပါတယ် (15:7). စိန့်ဂျိမ်းပေမယ့်, ယေရုရှလင်မြို့ဆရာတော်အဖြစ်, ထိုကောင်စီစိစစ်၏ဂုဏ်အသရေကိုသနား, ကဂျိမ်း '' ပိတ်ပွဲမှတ်ချက်တွေကသူ့ညွှန်ကြားချက်မြံနှင့်အတူအယူဝါဒအပေါ်ပရိသအမှာစကားသောသူပတေရုသသည်.
ယမမှားယွင်း Hold သောအခါ,?
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးရဲ့မှားယှငျးနိုငျအပေါ်ကက်သလစ်သွန်သင်ချက်ကိုမကြာခဏလှဲယူသည်. မှားယှငျးနိုငျအဖြစ်အရည်အချင်းပြည့်မှီဖို့ကကြေညာချက်အဘို့အလို့ငှာ, အချို့သောသတ်မှတ်ချက်တွေ့ဆုံခဲ့ရဦးမည်. ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးမဖြစ်မနေ:
က Universal ဘုရားကျောင်းရဲ့သင်းအုပ်ဆရာအဖြစ်ပြောဆိုရန်ရည်ရွယ်. နှိုင်းယှဉ်ခြင်းအားဖြင့်, သူပုဂ္ဂလိကဓမ္မပညာရှင်သို့မဟုတ်သာမန်ဘိရှော့အဖြစ်အတော်လေးမကြာခဏပြောသော, ထိုကဲ့သို့သောသူစိန့်ပေတရု၏ရင်ပြင်၌စုဝေးဘုရားဖူးအမှာစကားသကဲ့သို့. ဤသူသာဓကခုနှစ်တွင်, ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးရဲ့မမှားယွင်းကစားသို့မလာပါဘူး.
ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရား၏ကိစ္စရပ်များကိုစီရင်. အခြားမည်သည့်ဘာသာရပ်အပေါ်ထုတ်ပြန်ချက်များ (ထိုကဲ့သို့သောနိုင်ငံရေးသို့မဟုတ်သိပ္ပံပညာအဖြစ်) အရည်အချင်းပြည့်မှီပါဘူး.
အားလုံးသစ္စာရှိသောအပျေါမှာခညျြနှောပါလိမ့်မည်သည့် Nordad နှင့်ဆက်သွယ်ပြီးသေချာဆုံးဖြတ်ချက်ဆပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထား. အစာရှောင်ခြင်း၏တည်ထောင်ခြင်း, စာအုပ်၏ပိတ်ပင်ခြင်းကို, ထိုတစ်ဦးအထူးသဖြင့်အုပ်စုကဲ့ရဲ့သို့မဟုတ်တစ်ဦးချင်းစီသို့မဟုတ်, မျှသာစည်းကမ်းလုပ်ရပ်၏အားလုံးနမူနာ, နောက်ပြန်လှည်နေသောနှင့်, ထိုကွောငျ့, မမှားယွင်းမ.
အလိုတော်နှင့်ပြည့်ဝ၏သဘောတူခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူပွောဆိုရပါမည်. duress အောက်မှာပြုတတ်ကြ၏စကားသည်ရေတွက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့. infallibly ပြောဆိုရန်သူ၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းလုပ်ရဦးမည်, တိုက်ရိုက်ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးအားဖြင့်ဒါမှမဟုတ်ကွညောခပတျဝနျးကငျြအခွအေနေဖြင့်လည်းကောင်း.
ဒါဟာမကြာခဏမှားယွင်းပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအမှားသည်မိမိမှားယှငျးနိုငျငြင်းဆန်ခဲ့သည်ယူဆဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမဲ့ မှားယှငျးနိုငျဆုံးမဩဝါဒနှင့်အတူလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်, လုပ်ဆောင်သွားရန်မဟုတ်. ထို့အပွငျ, သူ၏ကြားခံကိုနာခံဖို့ကယေရှုရဲ့ command ကို (ကြည့်ရှု လုကာ 10:16 နှင့် မဿဲ 18:17) သူတို့ရဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားသမာဓိအပေါ်သို့ကဆက်ပြောပါတယ်လုပ်မခံခဲ့ရ (ကြည့်ရှု မဿဲ 23:2-3).
ဓမ်မဟောငျးကမျြးခုနှစ်တွင်, ဒါဝိဒ်သည်မိမိအပွစျမြားနေသော်လည်းဣသရေလအမျိုး၏တရားဝင်ရှငျဘုရငျကနျြ (ရှမွေလသည်၏ဒုတိယစာအုပ်ကြည့်ရှု, 11:1). သူ့သား, ရှောလမုန်မင်းကြီး, ခုနစ်ရာ၏မယားနှငျ့သုံးရာမောင်းမမိဿံခဲ့, နှင့်ပင်ရုပ်တုကိုးကွယ်ခြင်းအတွက်စေ့စပ်, သေးသူလည်းအနှစ်လေးဆယ်အတှကျဘုရားသခငျကိုရှေးခယျြထားတဲ့လူများ၏စီရင်ခေါင်းဆောင်ကျန်ရစ် (ရာဇဝငျမြား၏ပထမဦးဆုံးစာအုပ်ကြည့်ရှု, 11:3, 5, 7, 33, 42). ထို့အပြင်, တကျိပ်နှစ်ပါးသောတမန်တော်ကိုစဉ်းစား, ဓမ္မသစ်ကျမ်းဘုရားကျောင်းရဲ့ပထမဦးဆုံးခေါင်းဆောင်များသတည်း, နှင့်သခင်ကိုယ်တော်တိုင်အားဖြင့်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ထားသောခဲ့သည်!
ပတေရုသသူပင်ကိုယ်တော်သိသည်ကိုငြင်း (ကြည့်ရှု မဿဲ, 26:20, et al ။);
ပင်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းပြီးနောက်, သောမတ်စ်ယုံကြည်ခြင်းကိုတစ်ဦးအကြပ်အတည်းခဲ့ (ကြည့်ရှု ယောဟန်သည် 20:24-25);
ပတေရုသတယူသန်ထင်ရာစိုင်းပြသ (ကြည့်ရှု ဂလာတိ 2:11-14); နှင့်
ပေါလုကဝန်ခံ, "ငါသည်ငါ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ရပ်တွေကိုနားမလညျ. ငါမလိုချင်တာတွေမပွုများအတွက်, ငါမူကား "ငါကျင့်ချင်ကြဘူးသောအလွန်အမှုကိုပြု (ရောမ 7:15).
သို့သော်လည်း, အသင်းတော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်များရဲ့အပြစ်ဟာသူတို့ရဲ့အခွင့်အာဏာတော်ကိုဖျက်နိုင်ပါဘူး, မပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး၏ဖြစ်ရပ်အတွက်ကြောင့် infallibly တရားသေအယူဝါဒသတ်မှတ်သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုထိခိုက်စေပါဘူး. ကျနော်တို့ကခရစ်ဝင်ကျမ်းများတွင်ကြည့်ရှု, တကယ်တော့, ယဇ်ပုရောဟိတ်က, ကယာဖ, မိမိအပွစျပွုခဲ့ကြားမှအနာဂတ္တိဆုကြေးဇူးကိုထိန်းသိမ်းထား (ကြည့်ရှု ယောဟန်သည် 11:49-52, "ထွ Cathedra နှင့်မောရှေ" အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော).
အဆိုပါဘုရားကျောင်းသောကွောငျ့သူမ၏ခေါင်းဆောင်များ '' ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမြတ်မှုကို၏မခံမရပ်ဘူး, ဒါပေမဲ့ဖြစ်သောကြောင့် "လူအပေါင်းတို့သည်သမ္မာတရားသို့" သူမ၏လမ်းပြသောသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားပေးပို့ဖို့ခရစ်တော်ရဲ့ဂတိတော် (ယောဟန်သည် 16:13).
ပုပ်ရဟန်းမင်းမမှားယွင်းဆန့်ကျင် Arguments ဘာတွေလဲ?
ပုပ်ရဟန်းမင်းမှားယှငျးနိုငျငြင်းဆန်ခဲ့သည်သူတို့ရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများတွင်, ဝေဖန်ထားခြင်းမကြာခဏရည်ညွှန်း မဿဲ 16:23 ယရှေုသညျပတေရုသဆုံးမပြစ်တင်သော, "ငါ့နောက်သို့ Get ဟုဆို, ရာသူ့ကိုစာတန်! သင်တို့သည်ငါ့ကိုအဖို့အတားအဆီးများမှာ; သငျသညျဘုရားသခငျ၏ဘက်မှာမဖြစ်ကြသည်, ဒါပေမဲ့ယောက်ျား၏။ "ဒီသခင်တမန်တော်ဖြစ်သောကြောင့်ဒီလမ်းအတွက်ပတေရုသကဲ့ရဲ့, ယရှေုသညျစိတ်ဓာတ်ပြင်းပြမှုကိုရှောင်ရှားရန်အဘို့အတောင်းပန်, အကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်သူ့ရဲ့မစ်ရှင်စွန့်ခွာဖို့ယရှေုစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံခဲ့သောစာတနျသတူ (ကြည့်ရှု မဿဲ 4:1, et al ။). သခင်ဘုရား၏ဆုံးမသောပတေရုသရဲ့မမှားယွင်းထိခိုက်ပါဘူး, သို့သော်, ထိုစဉ်ကတည်းက တမန်တော်ရဲ့စကားတခုမှားပုဂ္ဂလိကတရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းနှင့်မတစ်ယူသန်ဆန်ဆုံးမဩဝါဒပေးဖွဲ့စည်း.
နောက်ထပ်ကျမ်းပိုဒ်, အချို့ပတေရုသရဲ့မမှားယွင်း disproves ယုံကြည်ရာ, စိန့်ပေါလုရဲ့ဒုတိယအခနျးမှာတွေ့နိုင်ပါတယ် ဂလာတိမှပေးစာ, သူထိုင်နှင့်တပါးအမျိုးသားများပြောင်းလဲနှင့်အတူစားရန်အနာက်ရဲ့ငြင်းဆန်ကျော်ပတေရုသနဲ့သူ့ရဲ့ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုဟုဆိုသည်ရာ (2:11). သို့သော်, ပေါလု၏ဆုံးမသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်မဩဝါဒတစ်ဦးအမှား "နဲ့လုပ်ဖို့ခဲ့သောကွောငျ့,"ပတေရုရဲ့မမှားယွင်းပြဿနာမှာဘယ်တော့မှခဲ့သည် (Tertullian, အယူမှားသူဆန့်ကျင် Demurrer 23:10).
တချို့ကပေါလုအားပေတရု၏ညံ့လို့သက်သေပြအဖြစ်ဤကျမ်းပိုဒ်အဓိပ္ပာယ်လွဲမှားပြီးရေးသား. ပေါလုကပတေရုသညျမိမိရပ်တည်မှု၏ထိုကဲ့သို့သောပြဿနာတစ်ခုတက်စေသည်အလွန်တကယ်တော့, သို့သော်, သူကတစ်ဦးထက်သာလွန်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခဲ့ယုံကြည်သည်ဆိုတာကိုပြသ. စိန့်သြဂတ်စလေ့လာအဖြစ်, "ပတေရုသညျထိုသူနောဥပမာတစ်ခုသို့ရောက်လာသောသူတို့အား left, ကြောင်း, သူတို့လက်ျာလမ်းကြောင်းကနေသွေဖည်မည်သည့်အချိန်တွင်လျှင်, သူတို့ "သူတို့ Junior ဖြစ်နှင့်သောသူတို့ထံမှဆုံးမခြင်းကိုလက်ခံမှသူတို့ကိုအောက်ကမစဉ်းစားသင့်တယ် (ဂျရုမ်းမှပေးစာ 82:22; စိန့် Thomas Aquinas အမည်ရှိလည်းမြင်, Summa Theologica 2:33:4).
အမှားယွင်းတဲ့သုံးသပ်အကဲဖြတ်ချက်တွေအပေါ်ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးရဲ့အများစုကြီးမြတ်သည်အပြစ်ရှိသောသူတို့ကိုပြီအချို့စက်ဝိုင်းထဲမှာဆက်ရှိနေသေးနေစဉ်, သမ္မာတရားကိုပေတရု၏ဆက်ခံအများစုထူးချွန်သီလ၏ယောက်ျားဖြစ်ရပြီဖြစ်ပါတယ်. ဝေဖန်သူများကအကျိုးရှိတွေ့ပြီ, သို့ရာတွင်, များစွာသော၏မြင့်မြတ်မှုကိုကျော်အနည်းငယ်ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးရဲ့အကျင့်ယိုယွင်းမီးမောင်းထိုးပြ.
ကက်သလစ်ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးအခြားသူလူတိုင်းနှင့်တူကယ်တင်ခြင်း၏လိုအပ်ချက်အတွက်လူသားတွေပြိုလဲကြသည်ကိုငြင်းပယ်ဖူးဘူး. ကက်သလစ်အပေါ်သို့အပြင်းအထန်တောင်းဆိုဖို့အဘယျသို့, သို့သော်,အဘယ်သူမျှမပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးအစဉ်အဆက်ကိုတရားဝင်ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားအပေါ်အမှားဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူပြီဖြစ်ပါတယ်ထွက်-ကတညျးဘယ်သို့သောသမိုင်းဝံ, မနောင်တော်သို့မဟုတ်ကောင်စီများ၏တစ်ယူသန်ဆန်ဆုံးဖြတ်ချက်ငြင်းခုံ.
အ Papacy ၏အယူဝါဒသမာဓိရန်သူကဆန့်ကျင်ကြီးပြင်းခဲ့ကြဆိုအပေါင်းတို့နှင့်စွဲချက်ဆန့်ကျင်ရပ်နိုင်. တစ်ခုချင်းစီကိုအမှု, Anti-ကက်သလစ်ပျက်ယွင်းခြင်းမှလွတ်မြောက်လာနှင့်သင့်လျော်သောသမိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဘာသာရေးအခြေအနေတွင်ယူသောအခါ, ကက်သလစ်တရားသေအယူဝါဒ၏အံ့ဖွယ်သမာဓိပြ, အသင်းတော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်များရဲ့ All-လွန်း-လူ့သဘောသဘာဝကြားမှ.3
ထွ Cathedra မောရှေသည်
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး infallibly ပြောသောအခါ,, သူစကားပြောခံရဖို့ကပြောသည်ဖြစ်ပါတယ် ဟောင်း cathedra, အရာအဘို့လက်တင်ဖြစ်ပါတယ် "ဟုအဆိုပါကုလားထိုင်ကနေ။ " အခွင့်အာဏာများဟာမူလတန်းထိုင်ခုံများ၏အယူအဆဓမ်မဟောငျးကမျြးမှလာ, မောရှေသည်လူအများ၏တရားသဖြင့်စီရင်၌ထိုင်ရာ (ကြည့်ရှု ထှကျမွောကျရာ 18:13).
မောရှေ၏အခွင့်အာဏာ, လွန်း, ဆက်ခံတစ်လိုင်းကတဆင့် perpetuated ခဲ့သည် (ကြည့်ရှု တရားဟောရာ, 17:8-9; 34:9). တကယ်တော့, မောရှေ၏ထိုငျခုံကျန်ရစ် ခရစ်တော်၏ကာလတိုင်အောင်တက်ကြွစွာ, ယရှေုသညျကိုယ်တော်တိုင်ထင်ရှားအဖြစ်, ဟုဆို, "ဒီကျမ်းပြုဆရာနှင့်ဖာရိရှဲတို့သည်မောရှေ၏ထိုင်ခုံပေါ်မှာထိုင်; ဒါကြောင့်သူတို့သင်ပြောပြသမျှကိုကျင့်သုံးရန်နှင့်စောငျ့ရှောကျ, ဒါပေမဲ့မသူတို့အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကို; သူတို့တရားကိုဟောပြောများအတွက်, ဒါပေမဲ့ "မကျင့် (ကြည့်ရှု မဿဲ 23:1-3).
ထဲမှာ စိန့်ယောဟန်၏ဧဝံဂေလိတရားကို ကျနော်တို့ယဇ်ပုရောဟိတ်ကယာဖ၏အခွင့်အာဏာအောက်တွင်ကျင်းပရေးအကြီးယဇ်ပုရောဟိတ်များနှင့်ဖာရိရှဲတို့တစ်ကောင်စီမြင် (11:49). ထိုကောင်စီမှာ, ကယာဖအနာဂတ္တိလွှတ်တော်, "ဒါဟာတယောက်သောသူသည်လူများအဘို့အသေဆုံးသင့်ကြောင်းသင်တို့အဘို့အသင့်လျှင်ဖြစ်ပါသည်, နှင့်တပြင်လုံးကိုလူမြိုး "ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်မနေသင့်ကြောင်း (11:50). ယောဟနျသမှတ်စုအဖြစ်, ကယာဖ "သူ၏ကိုယ်ပိုင်အညီ၏ဤမပြောခဲ့ပါဘူး, ဒါပေမဲ့ (မိမိအများ၏အကောင့်ပေါ်) "ထိုနှစ်တွင်ယဇ်ပုရောဟိတ်ဖြစ်ခြင်း (11:51).
ထို့ကြောင့်, ဘုရားသခငျသညျမောရှေ၏ဆက်ခံမှတဆင့်စကားပြောဆိုရန်ဆက်လက် (မခွဲခြားဘဲသူတို့ရဲ့ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းသို့မဟုတ်ဒုစရိုက်). ပေတရုသည်ပဋိညာဉ်တရားသစ်အတွက်အလားတူအခန်းကဏ္ဍကိုမပြည့်စုံ, ဘုရားသခငျသညျလူအဖို့ပြောသောဘယ်သူကိုမှတဆင့်ခရစ်တော်ရဲ့မွကွေီးကိုယ်စားလှယ်သို့မဟုတ် vicar အဖြစ်ထမ်းဆောင်.
လျြောညီစှာ, အ Papacy အပေါ်အများအပြားအစောပိုင်းအရေးအသားထိုအနည်းကိန်း၏မောရှေအစဉ်အလာကိုရည်ညွှန်း, သော authoritative ကုလားထိုင်. ဥပမာအားဖြင့်, ကို Muratorian တစ်ပိုင်းတစ်စ, A.D ပတ်ပတ်လည်ရောမမြို့၌ရေးထားလျက်ရှိ၏. 170, ပြည်နယ်များ, "ဖြစ်နိုင်ချေရှိတာကတော့မကြာသေးမီကကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်အတွက်, ... ဆရာတော် Pius, ရောမမြို့ရဲ့မြို့အသင်းတော်များ၏ကုလားထိုင်၌ထိုင်တော်မူ၏။ "
အလားတူပဲ, စိန့် Cyprian, ကားသေ့ချြ၏ဘိရှော့, အတွက်ရေးသားခြင်း 251, အခွင့်အာဏာရဲ့ဒီထိုင်ခုံမှလုပ်ကိုကိုးကား (ကြည့်ရှု Antonianus မှပေးစာ 55:8), နှင့်တစ်ချိန်ချိန်ယခုနှစ်မပြုမီ 325, Gaul ၏အမည်မသိကဗျာဆရာကြေညာ, "ဒီကုလားထိုင်များတွင်သူသည်ကိုယ်တိုင် Sat ခဲ့သည့်အတွက်, ပတေရုသ, အားကြီးသောရောမမွို့ရှိ, Linus မှာထားတော်မူ, ပထမဦးဆုံးရွေးကောက်တင်မြှောက်, "ဆင်းထိုင်ဖို့ (Pseudo-Tertullian, အ Marcionites ဆန့်ကျင်ကဗျာတစ်ပုဒ် 3:276-277).
အဲဂုတ္တုပြည်စိန့် Macarius (ဃ. အဖြစ်. 390) wrote: "အဟောင်းမောရှေနှင့်အာရုန်၏အဘို့, ဒီယဇ်ပုရောဟိတ်တို့ကိုလည်းသိမ်းယူစဉ်အခါ, အများကြီးခံစားခဲ့ရ; ကယာဖ, သူကသူတို့ရဲ့ကုလားထိုင်ခဲ့ကြသောအခါ, ညှဉ်းဆဲနှိပ်စက်ခြင်းကိုနှင့်သခင်ပြစ်တင်ရှုတ်ချ. ... ထို့နောက်တဖန်မောရှေသည်ပတေရုသဖွငျ့အရာ၌နန်းထိုင်ခဲ့, မိမိလက်အားခရစ်တော်၏အသစ်ဘုရားကျောင်းကျူးလွန်ခဲ့သူ, နှင့်စစ်မှန်တဲ့ယဇ်ပုရောဟိတ် " (Homily 26).
အယူဝါဒ defining အတွက် infallibly ၏ charism ခရစ်ယာန်စည်းလုံးညီညွတ်ရေး၏မြင်နိုင်နိမိတ်အရင်းအမြစ်ဖြစ်ဖို့ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးရဲ့မစ်ရှင်မှနျဆာပသည်.
သူကပတေရုသပြောကြသောအခါအားလုံးယုံကြည်သူများသည်အအယူဝါဒစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပေး၏ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုနောက်ဆုံးညစာစားပွဲမှာသညျယရှေုအားဖြင့်ညွှန်ပြခဲ့, "ကိုရှိမုနျ, ရှိမုနျကို, ကှ္ဂျကှ္ဂျ, စာတနျသငျသညျရှိသည်ဖို့တောင်းဆို, သူဂြုံကဲ့သို့သင်တို့ရှင်းရှင်းဖျက်ဆီးခြင်းငှါအလိုငှါ, ငါမူကားသင်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းကိုမပျက်စေခြင်းငှါသင်တို့ကိုအဘို့ဆုတောင်းကြပြီ; သငျတို့သသည်နောက်တဖန်လှည့်သောအခါ, "သင်တို့၏ညီအစ်ကိုခိုင်ခံ့စေ (လုကာ 22:31-32).
ပေတရုသည်အခြားသူများရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအားအတည်ပြုခြင်း၏တာဝန်ပေးထားခဲ့သည်. ဒီလိုလုပ်ဖို့သူ့ကို enable လုပ်ဖို့, ယရှေုသညျအပျေါမှာကျရှုံးမဟုတ်ကြောင်းယုံကြည်ခြင်းကြဲသည်ကတိပြု, ကြောင်း, မှားယှငျးနိုငျ၏ဆုကြေးဇူးကို. ဒါကြောင့် Petrine အခွင့်အာဏာမှနာခံမှုရှိသောကျန်ကြွင်းသောသူတို့သူတို့တပြင်လုံးကိုဘုရားကျောင်းနှင့်အတူဒေသနာ၌စည်းလုံးညီညွတ်ကြသည်ကို သိ. ၏သေသေချာချာရှိသည်နှင့်နောက်ဆုံးတွင်ခရစ်တော်နှင့်အတူဖြစ်ပါတယ်, အသင်းတော်များ၏ဦးခေါင်း. ပြောင်းပြန်, ဒီအခွင့်အာဏာ-ထိုကဲ့သို့သောချုံးကက်သလစ်အဖြစ်ကနေသူတို့ကိုယ်သူတို့ detach လုပ်လိုက်သောသူမြား, အရှေ့သြသဒေါက်ချာ့, နှင့်ပရိုတက်စတအသိုင်းအဝိုင်း-ရှိသည်ဟုဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဌာနခွဲနှင့်ခိုက်ရန်ခံစားခဲ့ရ.4
ယေရှုသည်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုအောက်ပါကာလ၌ဂါလိလဲပင်လယ်ကမ်းခြေပေါ်တွင်သူ၏ကိုယ်စားသည်သိုးထိန်းအဖြစ်ပေတရု၏သူ၏ကော်မရှင်သက်တမ်းတိုး. အဲဒီမှာ, ယရှေုသညျသူ့ကိုအဘို့ကိုသုံးကြိမ်သူ့မေတ္တာကိုအတည်ပြုဖို့သူ့ကိုမေးခဲ့တယ်, ပေတရု၏ယခင်ထိုကဲ့သို့ဗီဇာငြင်းဆိုမှုမှသက်ဆိုင်ရာ (ကြည့်ရှု မဿဲ 26:34, et al ။).
ချစ်ခြင်းမေတ္တာအသီးအသီးကတိသစ္စာပြုပြီးနောက်, ယရှေုသညျသူ၏သိုးတို့အဘို့သင်ပေးနှင့်ဂရုစိုက်ဖို့သူ့ကိုမှာထားတော်မူ, ဟုဆို, "ငါ့သိုးသငယ်တို့ကိုကျွေးမွေးလော့. ... ငါ၏သိုးတို့ကိုထိနျး. ... "ငါ၏သိုးတို့ကိုကျွေးမွေးလော့ (ယောဟန်သည် 21:15, 16, 17). သခင်ဘုရားသည်သိုးပိုင်ဆိုင်မှုလက်လွှတ်မပြုခဲ့, သူကပတေရုသူတို့ကိုအပျစဉ်သူ၏ကိုယ်ပိုင်သူတို့ကိုခေါ်ဆက်လက်များအတွက်.5 ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးရဲ့ရုံးဖြည့်ဆည်းရန်အဘို့အမိန့်ထဲမှာ ကိုယ်စားသည်သိုးထိန်း, ယေရှု၏သိုးတို့ကိုသေချာစေရန်ထင်ရှားအမှန်တရားတန်ဆာတိုက်ကျွေးကြသည်, သူ့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးအမှားမှထိန်းသိမ်းကာကွယ်ကြခံရဖို့အတှကျလိုအပျ. ဒါကြောင့်သူနီးပါးနှစ်ခုထောင်စုနှစ်ဘို့ခဲ့; ဒါထာဝရဘုရား၏လက်တော်ရဲ့ပြန်လာမကုန်မှီတိုင်အောင်ဖြစ်ရကြလိမ့်မည်.
ထိုခညျြနှောငျဖို့အခွင့်အာဏာနှင့်မြည်းကြိုးကိုဖြည်လည်းရှိအုပ်စုတစ်စုအဖြစ်တမန်တော်အားပေးခဲ့ကွောငျးစစ်မှန်တဲ့ကြောင့်ဖြစ်ပါသည် မဿဲ 18:18, ဒါပေမဲ့သော့၏တန်ခိုးတယောက်တည်းပတေရုသဘို့သိုထားခဲ့ပါတယ်. တမန်တော်အားဆက်ခံသည့်အတိုင်း, ကက်သလစ်ခရစ်ယာန်ဂိုဏ်းအုပ်ဆရာတော်တစ်ယူသန်ဆန်စည်းနှောင်ဆုံးဖြတ်ချက်များယူမှစုပေါင်းအာဏာရှိသည်, ဤမျှကာလပတ်လုံးသူတို့တစ် ecumenical ကောင်စီ၌စုဝေးနေကြတယ်အဖြစ် (မြေတပြင်လုံးကိုကိုယ်စားပြုနေတဲ့ကောင်စီ, တစ်လောကလုံးဘုရားကျောင်း) နှင့်ရောမမြို့ရဲ့ဘိရှော့နှင့်ဆက်ဆံသရုပ်ဆောင်, ပေတရု၏ဆက်ခံ. ↩
ဟေရှာယ၏အလငျး၌ပေတရု၏ရုံးခန်းတစ်ခု In-depth ကိုလေ့လာမှုအဘို့ 22, စတီဖင် K သည်မြင်. ရောင်ခြည်, ဒီကျောက်ထရံအပျေါ (ဆန်ဖရန်စစ္စကို: Ignatius Press မှ, 1999), p. 265. ↩
အ Papacy မြင် Warren ကာရိုး၏သမိုင်းအတွက်အမျိုးမျိုးသောအငြင်းပွားဖွယ်ဖြစ်စဉ်များတစ်နှံ့နှံ့စပ်စပ်နှင့်တာဝန်ရှိကိုင်တွယ်များအတွက်, ခရစျယာ၏တစ်ဦးကသမိုင်း, အုပျတှဲ. 1-5 (တပ်ဦးတော်ဝင်, ဗာဂျီးနီးယား: ခရစျယာသတင်းဌာန, 1985); လည်းပက်ထရစ်မက်ဒရစ်, ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးထူးအိမ်သင် (san Diego မှ: Basilica Press မှ, 1999). ↩
အရှေ့သြသဒေါက်ချာ့တို့တွင်ဌာနခွဲသဘာဝတွင်ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်လေ့, ချုံးကက်သလစ်တို့တွင်အများနှင့်ပရိုအတွင်းဌာနခွဲပုံမှန်အားဖြင့်အယူဝါဒလိုင်းများတလျှောက်ဖြစ်ပေါ်သော်လည်း. ဒါဟာအရှေ့ချာ့သည်လည်းသတိပြုစေခြင်းငှါ, တဆယ်တခုရာစု schism ကတည်းကရောမမြို့နှင့်အတူတစ်ဦးထက်ပိုသို့မဟုတ်လျော့နည်းမစုံလငျပြည်ထောင်စုထိန်းသိမ်းထားကြသူ, ဌာနခွဲနှိုင်းယှဉ်နဲ့အသံအယူဝါဒရှိပါတယ်ခြင်းဖြင့်အလယ်အလတ်ခဲ့, အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်, ထိန်းသိမ်းထားခဲ့. ပရိုများအတွက်, သို့သော်ငြားလည်း, ရောမမြို့ရဲ့အခွင့်အာဏာမှပြီးပြည့်စုံငျးကှာအခြေခံသဘောတရားဖြစ်သည့်အဘို့, ဌာနခွဲပြံ့နှံ့ခဲ့, သောင်းချီ-of-ထောင်ပေါင်းများစွာယှဉ်ပြိုင်ဂိုဏ်းဂဏ၏အတွင်းရရှိလာတဲ့. ↩
ဖြစ်သူ Scott ဘတ္ကိုကြည့်ပါ, -Norman Dahlgren, နှင့်ဗြာ. မစ္စတာ. ဒါဝိဒ်သည် Hess, ယရှေုသညျ, ပေတရုနှင့်အသော့ချက်များ (Santa Barbara, ကယ်လီဖိုးနီးယား: Queenship ထုတ်ဝေရေးကုမ္ပဏီ, 1996), p. 59; cf. Matt. 9:36-38. ↩